Waxa laga arko Magaalada Mexico | Wararka Safarka
Waxa laga arko Magaalada Mexico
Mariela Carril | 12/10/2021 17:00 | Mexico, Maxaa la arkaa
La caasimada ah Mexico waa magaalo duug ah, firfircoon, dad badan, madadaalo leh, taariikh leh, xiiso leh. Ma jiraan sifooyin loogu talagalay magaalada ugu muhiimsan dalka, magaalo aadan ka bixi karin adigoon booqan kan ugu muhiimsan.
Maanta, Actualidad Viajes, ayaan ku lug yeelannaa waxa laga arko Magaalada Mexico. Aynu baashaalno!
2 Waxa laga arko Magaalada Mexico
Ka hor intii aan loo aqoon Mexico DF, degmo federaal ah. Waa magaalada ugu muhiimsan dalka iyo wadnaha, siyaasadda, dhaqaalaha, bulshada iyo dalxiiska. Taariikhda saxda ah ee aasaaskeeda lama yaqaan, in kasta oo loo malaynayo inay ahayd qiyaastii sannadka 1325, gacanta dadka mexica taas oo, iyaduna, laga adkaaday oo ay u badnayd Isbaanish.
Ku -xigeenka Xisbiga Cusub ee Spain wuxuu ka soo bilaabmay 1535. Xornimada Mexico waxay dhacday 1821kii iyo qiyaastii 1824kii magaaladu waxay noqotay degmo federaal ah, oo ka duwan dawladihii kale ee dalka ka koobnaa, waxayna noqotay xaruntii awoodihii Dawladda. Dhamaadkii dhammaadkii 80 -meeyadii qarnigii XNUMX -aad, isbeddellada ku yimid maqaamkeeda siyaasadeed ayaa bilaabmay sidaasna magacu wuxuu noqday si fudud magaalada Mexico.
Maanta halkan waxaa ku yaal 35 meelood oo UNESCO ay ku dhawaaqday inay tahay goob dhaxalgal ah oo adduunka ah, in ka badan boqol madxafyo, Si kale haddii loo dhigo, waa magaalada labaad ee leh matxafyada adduunka ugu badan ee ka dambeeya London, markaa waad qiyaasi kartaa inay tahay a Maka dalxiis.
Zocalo waa magaca fagaaraha weyn ama Plaza de la Constitución, oo Waa barxadda ugu muhiimsan iyo midda ugu weyn adduunka. Hareeraheeda waxaa ku yaal goobo badan oo muhiim ah, tusaale ahaan Metropolitan Cathedral ee Mexico, oo ah qaabka baroque oo lagu amray in Hernán Cortés laftiisu ka dhiso macbadka Aztec. Gudaha waxaa ku jira Crypt of Archbishops, meesha allabariga ee Boqorrada, Kaniisadda Boqortooyada iyo kooxda heesta quruxda badan.
Dhisme kale oo ku xeeran Zócalo waa Qasriga Qaranka oo leh xayndaabka caanka ah ee Diego Rivera oo aan caan ahayn. Mid ka mid ah geesaha barxadda waxaa ku haray waxa loogu yeero Duqa Magaalada Templo, wadnaha ilbaxnimadii hore ee Mexico iyo caasimaddii hore, Tenochtitlán. Gumeysigii Isbaanishku wuxuu isku dayay inuu baabi'iyo dhammaan xusuusta markii la dhisayay magaalada, laakiin intii lagu jiray qarnigii XNUMXaad qoditaanno kala duwan oo qadiimiga ah ayaa daaha ka qaadayay waayihii weynaa.
Waxaad arki doontaa hadhaagii Ahraamta iyo dhismayaal kale wixii laga helayna waxay ku yaalliin madxafka ku dhex jira dhismaha, tusaale ahaan gargaarka dhagaxa ee ilaahadda Coyolxauhqui, sphinx of godka dabka iyo taallo cajiib ah oo Tlatecuhtli ah.
Sidoo kale, geeska kale ee Zócalo ayaa ah Xariirka Hore ee Mercaderes, koox ka mid ah dhismayaal ganacsi laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad, ayaa maanta loo rogay huteelo iyo dukaamo raaxo leh. Meel wanaagsan oo laga soo muuqan karo waa barxadda hoteelka Majestic ama aragtida Gran Hotel.
Sidoo kale gudaha xarunta taariikhiga ah ee magaalada waxaad booqan kartaa Kuleejka San Ildefonso, machad waxbarasho oo aad u heer sare ah, oo fasalladiisu dhaafeen jilayaal sida Frida Khalo iyo Diego Rivera. Dhab ahaantii, lammaanaha ayaa halkan ku kulmay.
Ka socoshada jidka dadka lugeeya ee Madero laga bilaabo barxadda aad la kulanto mid ka mid ah dabaqyada dhaadheer ee magaalada, waxa loogu yeero Torre Latinoamericana. Aragtideedu waa mid run ah, laakiin gudaha waxaa ku yaal bandhig joogto ah, waxaa jira Matxafka labada sanadood, baar ku yaal dabaqa 40 -aad iyo maqaayad ku taal dabaqa 41. Barxadda furan waxay ku taal dabaqa 44 -aad.
Haddii aad jeceshahay farshaxanka markaa waa inaad soo booqataa Qasriga fanka oo u dhow Torre Latino. Dhismuhu wuxuu bilaabmay horraantii 1900-meeyadii, wuxuu ku yaal qaabka Art-Nouveau, in kasta oo gudaha uu yahay Art-Deco. Waxay ka samaysan tahay marmar cad oo gudaha waxaa jira shaqooyin ay sameeyeen Siqueiros, Diego Rivera ama Rufino Tamayo. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale ka shaqaysaa gudaha Madxafka Dhismaha iyo tiyaatarka oo aad ka soo qaybgeli karto bandhig caan ah oo aad loogu xiisay dalxiisayaasha: the Ballet Folkloric ee Mexico.
Haddii aad si gaar ah u jeceshahay Diego Rivera iyo shaqadiisa waad soo booqan kartaa Matxafka Mural Diego Rivera kaas oo ah dhammaadka Bartamaha Alameda, oo ah waddada ilaha iyo cagaarka. Wixii farshaxan dheeraad ah waxaa jira Madxafka Farshaxanka Qaranka, horteeda Plaza Manuel Tolsá oo ay ku jirto ururinta farshaxanka qiimaha leh ee ka soo bilaabma qarnigii XNUMXaad ilaa qarnigii XNUMXaad.
Booqashada magaalo had iyo jeer micnaheedu waa guuritaan, socod, dhaqaaqid. Halkaan, marka laga reebo xarunta, waxaa laga helaa qurux xaafadaha kala duwan. Mid ka mid ah waa Coyoacán, koonfurta magaalada. Waa a Xaafadda Bohemian, meesha fanaaniinta iyo guryaha gumaysiga, oo leh madxafyo, suuqyo, dukaamo buugag, dukaamo qaxwo. Tani waa halka Guriga Buluugga ah ee Firda Khalo iyo Webiga Diegoa, maanta matxaf, laakiin sidoo kale waxaa jira Matxafka Guriga Leon Trotsky, ka Guriga Hernán Cortés, Beerta Qarniga ama Guriga Dawladda Hoose.
Xaafadaha kale ee lagu taliyay ee quruxda badan waa Condesa iyo Roma, oo leh waddooyinkeeda quruxda badan ee geedaha lagu xardhay iyo guryaheeda oo leh qaab dhismeedyo kala duwan, dukaamo, kafateeriyayaal, baararka casriga ah. Waa halkaan oo aad sidoo kale ku daawan karto sida ugu fiican Fanka reer Mexico ama fanka waddada. Si aad u qaddariso tan waxaad iska qori kartaa a socdaal baaskiil la hagayay taas oo ku dhex marta koonayaasha kala duwan ee magaalada.
Socodka, hubaal waad gaari doontaa Fagaaraha Saddexda Dhaqan, Dhaqanka Isbaanishka, maxaa yeelay waxaa jira kaniisaddii gumaysiga iyo macbudkii, dhaqanka Tenochtitlán oo leh burburkiisa iyo haramka iyo dhaqanka Mexico ee casriga ah oo leh Xarunta Dhaqanka ee Jaamacadda. Waa dhif inaad wax walba ku aragto hal meel, laakiin aad bay u fiican tahay marka laga eego dhinaca dalxiiska
Haddii aad tahay Kaatoolig oo aad jeceshahay quduusiinta, Meksiko waxay la mid tahay Bikradda Guadalupe ka dibna booqo Basilica ee Guadalupe waa waajib. Bikradda Guadalupe waa ilaaliyaha magaalada, dalka iyo Latin America. Waxaa la dhammaystiray 1709, in kasta oo qaybta cusubi ay ka bilaabantay 1976. 20 milyan oo qof ayaa soo booqata sannadkiiba.
Haddii aad jeceshahay inaad aragto dhaqanka oo aad dukaameysato, markaa waa inaad ka faa'iideysataa suuqyada oo macno ahaan mid aad loogu taliyay ayaa ah Suuqa San Juan. Meeshani waa badhtamaha magaalada waxayna leedahay qarnigii iyo badhkii nolosha. Waxaa jira wax kasta oo ka yimaada badeecadaha cuntada caadiga ah iyo kuwa qalaad, oo ay ku jiraan cayayaanka, ilaa waxyaabaha caanaha laga sameeyo.
Meksiko sidoo kale waxay la mid tahay kacaanka, markaa si aad u ogaato dhaqdhaqaaqa madaxbannaanida Meksiko waa inaad tagtaa Taallada Kacaanka, qaab -dhismeed aad u weyn oo cajiib ah gudaha Plaza de la República. Waxay ku saabsan tahay a mausoleum oo loogu talagalay geesiyaasha Meksiko, Pancho Villa iyaga ka mid ah. Waxaa sidoo kale jira Madxafka Kacaanka, aragtida dhexdhexaadka ah oo gaadhaysa ku dhawaad ​​66 mitir, cagaheeda tiirarka tirooyinka wax ku leh, iyo waxa loogu yeero Paseo Linternilla oo leh guryaheeda.
Waxa kale oo la xiriira madaxbannaanida, gudaha Paseo de la Reforma, the Malaggii Gobonnimada, astaanta qarankal. Waxay ka bilaabmaysaa 1910kii, sannadkii xorriyadda qaranka, waxayna leedahay ilaahadda Giriigga ee guusha ee naxaasta leh. Jidkan ayaa ah kan ugu muhiimsan magaalada, oo leh 15 kiiloomitirs, taabashada meelo badan oo muhiim ah safarkeeda.
Habeenkii, gudaha Ilaha Qarniga ee Plaza de la República, ee bandhig faneed iyo muusig. Oo ka hadlida habeenka, marka qorraxdu dhacdo meel wanaagsan ayaa ah baaqa Aagga casaanka taas oo ku taal Colonia Juarez.
hay huteelada, baararka, maqaayadaha, meelaha lagu caweeyo iyo dalxiisayaal badan, maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay baashaal. halkan waa goob khaniis ah Sidoo kale waxaadna halkan ka aadi kartaa xaafadda Roma Forte adigoo dhex maraya Glorieta de los Insurgentes, mid ka mid ah isgoysyada ugu waaweyn ee dadka lugeeya ee magaalada.
Ugu dambayn, laakiin ugu yaraan, meelo kale oo aadan ka maqnaan karin liistada maanta ee waxa aad ku arki doonto Magaalada Mexico: the Castle chapultepec, hoygii hore ee Maximilian Emperor ee 1864, oo leh alaab guri iyo qurxinta wakhtigaas, the Matxafka Taariikhda Nacional (gudaha iyo socdaal la hagayo haddii aad rabto), the Kaymaha Chapultepec 500 hektar, oo aad u weyn, oo leh matxafyo, harooyin iyo maqaayado, baaxad weyn oo qiimo leh Matxafka Qaranka ee Anthropology ee Mexico (Tani waa halka Dhagaxa Qorraxda uu yaallo, koofiyaddii Moctezuma, nuqulkii qabriga King Pakal, oo u dhashay Palanque oo leh maaskaro jaadkiisa ah, ama Qolka Mayan.
Dibadbaxyo qurux badan oo qurux badan ayaa jira Xaafadda Polanco, oo hoy u ah safaarado badan, si loo dhex maro xaafadaha aamusan waa San Ángel iyo Chimalistac, the Kanaalka Xochimilco, si aad u gasho trajineras midab leh oo arag suuqa ama Matxafka Dolores Olmedo oo leh ururinta ballaaran ee shaqooyinka Rivera, iyo dabcan, goobta qadiimiga ah ee Teotihuacán oo leh Ahraamyadeeda qorraxda iyo dayaxa, qalcadda, waddada dadka dhintay iyo kuwa kale. Waxaa lagu gaaraa bas.
Dabcan, liiskan aan ku dhiirri -gelinnay inaan sameyno waa uun tusaalaha waxa la yaab leh oo aad u weyn Mexico City ay u fidiso martideeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Waxa laga arko Magaalada Mexico
Waxa lagu arko Jaipur
Waxa lagu arko La Gomera